Horjoogeyaashii ku fashilmey shirkii Kismaayo oo shuruud la filaayay keenay - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Horjoogeyaashii ku fashilmey shirkii Kismaayo oo shuruud la filaayay keenay
Horjoogeyaashii ku fashilmey shirkii Kismaayo ayaa shuruud la filaayay keenay. Warqad ay war ku soo qoreen ayaa shanta horjooge ee Cabdiwelli Gaas, Shariif Xasan, Xaaf, Waare, iyo Axmed Madoobe dalbadeen in ahaanib soo kala dhexgasho.
Waxa dadka badankiisu qabaan in wakiilka qaramada midoobey u fadhiya Somaliya Maykal Kiinting oo u dhashay Ingiriska uu yahay kan talada siinaya si ay u fushadaan hawlihiisa curyaamin.
Waxa kale oo dibedda ka riixaya oo si cadaana loo ogyaha Wahaabiyada Sucuudiga iyo Imaaraadka. Fashilka ku yimi shirkoodii Kismaayo ayaad ka arkeysay dadka deegaanada ay sheegteen oo caro mooyee ka muujin wax taageero.
Su’aasha aad is waydiinayso ayaa ah haddii Somaliya sidan loo hor istaagi karo xilligii la doono kadibna la oran karo ajaanib noogu yeera si loo fuliyo danaha goboleysi ee lala rabo dalka, maloo baahan yahay nidaam goboleysi (federaal) oo horjooge kasta ku kibro, isna moodi karo inuu ka madax banaan yahay dawlada dhexe.
Ku darso horjoogeyaashan badankoodu waa la wataa, mana rabaan in lala xisaabtamo ayadoo dawlada dhexe kumanaan doolar oo ah siiso diideyna xisaab celin.
Tani waxay kuu muujinaysaa in dawlada Somaliya tahay mid dadkeeda u tudheysa ayadoo awoodo inay shaqsiyaadkaasi talaabo ka qaado.
Sida kaliya ee daku dawlad degan ku helayaa waa in barlamaanka Muqdisho fadhiya shaqeyo si saxana loo tirtiro heeryadii Mahiiga iyo Sheekh Shariif dalka kaga tageen.
Lana magacaabo gudoomiyeyaal gobol. Ilaa hadda ma Jiro hal maamul goboleed oo sharci ku fadhiya dawladuna ictiraafsan tahay.